तनावमा पेट पोल्ने गरेको छ ? जान्नुहोस् कारण यस्तो छ ... - EAAWAJ (इ-आवाज)
तनावमा पेट पोल्ने गरेको छ ? जान्नुहोस् कारण यस्तो छ …
काठमाडौं : कामको हतारले दिमाग रन्थनिएको बेला होस् या तनावको बोझले थिचिएको बेला। कुनै चिज पाउँदाको खुसीले मन भरिएको होस् वा केही गुमाउँदाको पीडाले दुःखी। कुनै योजनाले व्यग्र बनाउँदा होस् वा कुनै योजना पूरा नहुँदाको छट्पटी।
यी सबै बेला दिमाग त भारी हुन्छ नै, पेट पनि कता–कता गह्रौं भएको वा पोलेको महशुस गर्नुभएको छ ? छ भने त्यो सामान्य हो। त्यो पेट पोलेको होइन। बरु पेटमा हुने ‘दोस्रो मस्तिष्क’ ले हाम्रो उत्तेजना, आवेग, हर्ष वा विस्मातमा प्रतिक्रिया जनाएको हो।
अब तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ, मस्तिष्क त हाम्रो टाउकोमा पो हुन्छ पेटमा यो दोस्रो मस्तिष्क कहाँबाट आयो ?
त्यसो भए के पेटको इन्टेरोइन्डोक्राइन कोषले वासना, स्वाद र स्पर्स पनि अनुभूति गर्न गर्छ ?
← राष्ट्रिय एकताका लागि स्पेनका राजाको आह्वान
हट्यो कालिकोटको कर्फ्यु →